Xaaf iyo Axmed Madoobe oo ay soo wajahdey xaalad adag DF Oo wada qorshihii u danbeyey warar sheegaya In… - Allbanaadir Media | Allbanaadir Media
Xaaf iyo Axmed Madoobe oo ay soo wajahdey xaalad adag DF Oo wada qorshihii u danbeyey warar sheegaya In…
May 13, 2019 - Comments off
Muqdisho (Allbanaadirmedia.com)-Waxaa dhawaan fashil kusoo dhamaaday shir mudo isbuuc ku dhaw ka socday magaalada Garawe ee caasimada Puntland, shirkan ayaana ahaa mid wadatashi ah oo u dhaxeeyay madaxda dowlada federaalka iyo kuwa Maamul goboleedyada.
Shirka Garawe ayaa intii uu socday caqabadaha ugu adkaa ee la isku fahmi waayay waxa ay ahaayeen doorashooyinka la filayo in ay ka dhacaan maamulada Jubbaland iyo Galmudug.
Madaxda maamulada Galmudug iyo Jubbaland ayaa ugu dambeyn shirka isaga baxay kuna tilmaamay mid fashilmay, waxa ayna magaalada Garawe ka tageen iyada oon wax natiijo ah shirka kasoo bixin ayna wali joogaan madaxdii kale uu ku jiro Madaxweynaha.
Madaxweynaha Soomaaliya iyo Ra’isul Wasaaraha ayaa sameeyay qorshayaal lagu kala fur furayo isbaheysiga cusub ee soo baxay ee niyada u yeelay maamulada Jubbaland iyo Galmudug oo markii hore taagnaa heer is dhiibid ku dhaw.
Fashilka shirkii Garawe kadib ayaa dowlada Federaalka ka shaqeesay in meesha laga saaro isbaheysigii hore ee u dhaxeeyay Puntland , Jubbaland iyo Galmudug, waxaana taas badalkeeda xalay Garawe Isbaheysi cusub kaga dhawaaqay maamulada Puntland, Koonfur Galbeed iyo Hirshabelle.
Isbaheysigan cusub waxaa ka maqan labada maamul ee Jubbaland iyo Galmudug, waxaaa isbaheysigan ku jira labada maamul ee dowlada federaalka taageerada u ah, waxa ayna taasi muujineysaa in Isbaheysigii hore uu is rogay.
Madaxda maamulada Galmudug iyo Jubbaland ayaa hada xaalka ku xun yahay, waxaana labadan maamul garbahooda ka baxay maamuladii kale ee dalka ka jiray, waxaa sidoo kale wakiilada beesha Caalamka loo gudbiyay dacwad ah in shirkii Garawe fashiliyeen .
Madaxweynaha Puntland Saciid Deni ayaa la aaminsan yahay in uu ahaa ninkii soo nooleeyay niyadana u yeelay maamulada waqtigoodu dhamaaday ee Jubbaland iyo Galmudug, waxaana la sheegay in Deni uu garabkooda hada ka baxay saaxiibadiisii hore.
Dad badan ayaa aamisan hadii dowlada Federaalka ku guuleesato in Puntland ka reebto isbaheysigii kala dhaxeeyay Galmudug iyo Jubbaland in meesha ka bixi doonaan labada Hogaamiye ee Axmed Madoobe iyo Xaaf oon taageero badan heesan.
Wakiilada beesha Caalamka ayaa sidoo kale laga cabsi qabaa in cadaadis saaraan Madaxda maamulada Galmudug iyo Jubbaland oo lagu eedeenayo in ay diidan yihiin in doorasho ka dhacdo deegaanadooda ayna doonayaan wax isdaba marsi iyo mudo kororsi.